တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ကိုပြူးကျယ်သို့ ပေးစာ … အပိုင်း (၁၂)
ကိုပြူးကျယ်သို့ ပေးစာ … အပိုင်း (၁၂)
မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေရှင် …။
ရက်သတ္တ သုံးပတ်လောက် မရေးဘဲ ပစ်ထားတယ်ဆိုပြီး ကိုပြူးကျယ်တယောက် ရွှေစိတ်တော် ငြိုငြင်နေပြီလား မသိဘူး။ အခုပြန်ရေးလိုက်ပါပြီ။ မြန်မာနှစ်ကူး သင်္ကြန်အခါတွင်းမို့ အမှတ်တရ သင်္ကြန် အကြောင်းလေးတွေ ရေးနေမိတာကို ကျမစာ အမြဲဖတ်ပြီး နှိပ်ကွပ်နေကျ ဗြိတိန်နိုင်ငံရောက် မိတ်ဆွေကြီး တဦးက “မွဲပြာပုဆိုး” လို့ အမည်တပ် လိုက်ပါတယ်။ ဒါတွေပဲ ရေးနေတာပဲ …. တဲ့။ တယောက်လာသင်္ကြန် တယောက်လာသင်္ကြန်နဲ့ မင်းတို့ မွဲပြာပုဆိုးတွေ အသဲမှာ မတိုးဘူး … ဆိုပဲ။ အနှီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက နဘေထပ်တာလည်း ၀ါသနာ ထုံလှတာကြောင့် အဲဒီလို ပြောတာ ခံလိုက်ရ ပါရောလား။ သူဘယ်လို ပြောပြော မနာလိုဖြစ်လို့ ပြောတာလို့ပဲ သဘောထားပြီး ကျမကတော့ မွဲမွဲပြာပြာ ပုဆိုးကြီးကို အမြတ်တနိုးနဲ့ လေးငါးရက်လောက် မချွတ်တမ်း ဆင်မြန်းလိုက်ပြီးတဲ့ သကာလ …. ဒီနေ့တော့ဖြင့် ကိုပြူးကျယ်ဆီ ခြေဦးလှည့်လိုက်ပါပြီ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ကိုပြူးကျယ်ထံပေးစာ အမှတ် (၁၁) မှာ စကြာတေးထပ် အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ပြောမှာကတော့ ရှစ်ဆယ်ပေါ် တေးထပ် အကြောင်းပါ။
ရှစ်ဆယ်ပေါ်တေးထပ် ဆိုတာ တေးထပ်အကြီးစား တမျိုး ဖြစ်ပါသတဲ့။ ဘိုးတော်မင်းလက်ထက် (၁၁၈၀)ပြည့်နှစ်က စပြီးပေါ်ပေါက် လာတဲ့တေးထပ်ဖြစ်လို့ ရှစ်ဆယ်ပေါ်လို့ ခေါ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အမျိုးအစားအားဖြင့် ပြခဲ့ပြီးတဲ့ တေးထပ် ၆-မျိုးအပြင် ထပ်တွန့် ရှစ်ဆယ်ပေါ်၊ ထပ်ကွန့် ရှစ်ဆယ်ပေါ် ဆိုပြီး ထပ်မံ ကွဲပြားတယ်လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။
အပိုဒ်ရေအားဖြင့်၊ အခံအအုပ်အားဖြင့်၊ အပြစ်ဒေါသအားဖြင့် ကတော့ ပြခဲ့ပြီးတဲ့ တေးထပ် စပ်နည်းတွေနဲ့ အတူတူပါပဲ။
အက္ခရာ လုံးရေအားဖြင့်တော့ အပိုဒ် (၁၈)ပိုဒ်ရဲ့ အပိုဒ်တိုင်းမှာ အရင်တေးထပ် အက္ခရာတွေထက် ၂ လုံးစီ၊ ၂ လုံးစီ ပိုပြီး ရေးသားရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အစပ်အားဖြင့်၊ လေပြင်းလေလျော့ အားဖြင့်မှာတော့ အရင်တေးထပ်တွေထက် ၂ လုံးစီပိုထားတာကြောင့် တလုံးစီ နောက်ဆုတ်ပြီး စပ်မိ ဟပ်မိ ထပ်မိ စေရပါမယ်တဲ့။
ဥပမာ ..တေးထပ်မှာ ၁-အပိုဒ်ရဲ့ အဆုံးလုံးနဲ့ ၂-အပိုဒ်ရဲ့ တတိယလုံးကို စပ်ရ ပေမဲ့ ရှစ်ဆယ်ပေါ်မှာတော့ ၁-အပိုဒ်ရဲ့ အဆုံးလုံးနဲ့ ၂-အပိုဒ်ရဲ့ စတုတ္ထလုံးကို စပ်ရမယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။
နမူနာ ရှစ်ဆယ်ပေါ်တေးထပ်လေးတွေ ရှုစားကြပါအုံး။
သုံးချက်ညီ ရှစ်ဆယ်ပေါ်တေးထပ် (တောဖွဲ့-မယ်ဆို)
တချုံ နှစ်ခြုံ-အရုံဆင့်၊ ရဂုံအမြင့်-ကမ်းသာယာ၊
လှိုင်ပေ့ကြိုင်ပေ့-မြိုင်ကွေ့ဝနာမှာ၊ ထိုင်၍ကညာ သီကုံးကာပ-မြူး။
ချောက်ဝယ်-မျောက်ငယ်-ပျောက်ကွယ်ကြ၊ ကြောက်ဖွယ်ရာပ-ခေါ်ကြ အော်ကြသံ။
မောင်တော်ရိုက်လှဲ့-ကိုက်မဲ့လာတယ်၊ မိုက်တဲ့သတ္တ၀ါ-သေသွားအောင်ပလေး။ …. ။
ထပ်တွန့် ရှစ်ဆယ်ပေါ် တေးထပ် (မိုးဖွဲ့-မောင်ဆို)
ဗိန္ဒုံ ဗိန္ဒုံ-ငွေအမ္ဗု၊ ရေသံအစု-ထစ်မြည်ကာ၊
ဖြိုးလျှံ ကျိုးသံ-မိုးနဘံကွဲသို့၊ ငြိုးရန်အခဲ-သဲတော့ မဲတော့ပုံ။
ခွေကာလွမ်းလို့-တပါးမရွှင်တယ်၊ သိကြားဘုရင်-ရှော့ဘူးထင်ငဲ့လေး။ … ။
ကွင်းစကွင်းပိတ်နဲ့ ရေးထားတဲ့ ထပ်တွန့်ကာရန်မျိုးကို မ ပိုဒ် ၉-ပိုဒ်ရဲ့ ကြိုက်တဲ့ အပိုဒ်မှာ တွန့်နိုင်ပြီး ကျန်အပိုဒ် တွေမှာတော့ တွန့်ရိုးထုံးစံ မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ တွန့်ပုံကတော့ တွန့်လိုတဲ့အပိုဒ်ရဲ့ ရှေ့ထက်ဝက် အက္ခရာ ၄-လုံးကို ကာရန်တူ လုံးရေတူ ပြုပြီး တဆဖြစ်စေ နှစ်ဆဖြစ်စေ နောက်သို့ဆုတ်ကာ တွန့်နိုင်ပါသတဲ့။ အထက်ပါ ရှစ်ဆယ်ပေါ် ရဲ့ အတွန့်ကတော့ နှစ်ဆ တွန့်ထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ထပ်ကွန့် ရှစ်ဆယ်ပေါ် တေးထပ် ( ပန်းဖွဲ့-မယ်ဆို)
(ဇော်မွှား,သော်က,မြတ်လေးငုံရယ်၊ မပြတ်မွှေးထုံ ကြယ်နှင့် ဇွန်ကြက်ရုံး)
တိုက်ပန်း, ဒန့်ဒလိပ်-နွယ်ဘိန်းဖြာတယ်၊ ချယ်သိန်းမာလာ-မညိုလုံး၊
စကားစိမ်း,စကားဝါ-အပျိုသုံးဘို့တဲ့၊ (အလိုဘာတဲ့…) အဖိုဂမုန်း -ဆန်းလှသနော်၊
နှင်းဆီမိုးဆွေ,ဆောင်တော်ကူး၊ ယောင်သော်အထူး-ပန်းခက် နမ်းလျှက်မျှော်။
(ခေါင်ရမ်း, ခွာညို-ဒဟတ်ခရားနှင့်၊ ဇလပ်,စကား-ဆတ်သွားမြတ်စွယ်တော်)
ပုန်းညက်, အင်ကြင်း-ရင်ခတ်ပေါ်တယ်၊ သဇင်, ဂန့်ဂေါ်-ပေါက်နီ, လဲနှင့်၊
ပိတောက်, သရဖီ, ခ၀ဲ-ကရမက် သင်းပျံ့ထုံ၊ ပန်းရင့်ပန်းဥစုံ၊
ပင်တိုင်နန်းမြင့်-ခန်းသဉ့်ဘုံမှာ၊ ပန်းပွင့်ဖုံဖုံ ကိုယ်လုံးဝေလို့လေး။ … ။
(သို့ကလောက်ပန်းနှင့်-ဆန္ဒမကုန်တယ်၊ ပန်ရ ဘယ်ပုံ-ဘယ်ပန်းလေသိလေး။)
ကွင်းထဲက အပိုဒ်တွေဟာ အကွန့်ပိုဒ်တွေပါပဲ။ ရေးရိုးရေးစဉ် ၁၈-ပိုဒ်မှ အပိုပိုဒ်တွေကို အကွန့်ပိုဒ်လို့ ခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ၁၈-ပိုဒ်ရဲ့ အဆုံးမှာသာ ကွန့်လေ့ ကွန့်ထ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အတွန့် - အကွန့် ခေါ်ရခြင်းကတော့ …
အတွန့်ဆိုတာ “ကြောက်ရွံ့လို့ နောက်တွန့် သွားတယ်” ဆိုသလိုပဲ နောက်ဆုတ်သွားတာကို တွန့်တယ်လို့ ဆိုတာပါ။ ကဗျာမှာ နောက်ကိုဆုတ်ပြီး တွန့်၍ ကာရန်ယူရေးသား တာကို အတွန့် လို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အကွန့်ကတော့ “ရွှေဉာဏ်တော် ကွန့်မြူးတယ်” ဆိုတဲ့ အသုံးလိုပဲ ဖြစ်မြဲထက် ပိုမိုလွန်ကဲတာကို ကွန့်တယ် လို့ ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာမှာလည်း ရေးသားမြဲ ထုံးစံအပိုဒ်တွေထက် ပိုမိုလွန်ကဲ ရေးဖွဲ့ခြင်းကို အကွန့်လို့ ခေါ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အတွန့်မှာ အတက်ပိုဒ် အအုပ်ပိုဒ်ဖြစ်တဲ့ မ-၆ပိုဒ်ရဲ့ ရှေ့ထက်ဝက်မှာသာ တွန့်နိုင်ပါတယ်။
အကွန့်မှာတော့ ၁၈-ပိုဒ်ထဲက မည်သည့်အပိုဒ်မဆို ကွန့်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီတပတ် ရှစ်ဆယ်ပေါ် တေးထပ်ကတော့ ဤမျှသာပါပဲ။
ကိုပြူးကျယ်နှင့်တကွ မြန်မာကဗျာ ချစ်သူ ဘလော့ဖတ် ပရိသတ်အပေါင်း အတွန့် အကွန့် ရှစ်ဆယ်ပေါ် တေးထပ်လေးတွေနဲ့ နှစ်သစ်မှာ ပျော်မွေ့နိုင်ကြပါစေ ရှင်။
Posted by မေဓာဝီ at 4:11 AM
ချွဲကာ နွဲကာ- ပဲရွာက၊
သော့ကာ နော့ကာ- ချော့ပါဘူး။
တစ်ရက် နှစ်ရက်- သုံးရက်သင်္ကြန်ကို၊
4/19/2007 12:48 AM
ကိုပြူးကျယ်ဆိုတာ ဘယ်သူပါလိမ့်။ မေဓာဝီရဲ့ကိုကိုကြီးပဲလားကွယ်။
4/19/2007 6:11 AM
ူတို့ထင်တာက ကိုပြူးကြယ်ဆိုတာ မျက်လုံးပြူးပြူး၊ ပါးစပ်ကြယ်ကြယ် နားရါက်ကားကား လမ်းလျှောက်ရင် ကားယား ကားယား၊ စကားပြောရင် လက်သီးလက်မောင်းသန်းနဲ့ လူကိုပြောတာလား။ အဲဒါဟုတ်ရင်ကျုပ်ကို ရည်စူးတာပဲဖြစ်မယ်။
4/19/2007 6:22 AM
တရက် နှစ်ရက်-သုံးရက် ဒီအခါ၊
ယောနိသော-ထားလှည့်ပါကွယ့်လေး။ …. ။
4/21/2007 4:19 AM
နွေညနေ၏ ချွေးသိပ်မိုး …
ဤသို့ ကြားနာ ခဲ့ရပါ၏ …
ဥပုသ် ဆိုတာ …
ဘကြီးဘဘေ၏ နိုင်ငံရေးရာ အဖြာဖြာ အပိုင်း (၅)
ပြောင်းလဲခြင်း ... သင်္ကြန် (နိဂုံး)
ပြောင်းလဲခြင်း ... သင်္ကြန် (၃)
ပြောင်းလဲခြင်း ... သင်္ကြန် (၂)
ပြောင်းလဲခြင်း ... သင်္ကြန် (၁)
နှစ် ၁၀၀-ပြည့်လေပြီ … ဆရာဇော်ဂျီ
ကျမနှင့် သင်္ကြန်သီချင်းများ (၃)
ကျမနှင့် သင်္ကြန်သီချင်းများ (၂)
ကျမနှင့် သင်္ကြန်သီချင်းများ (၁)
ကလေး အတွေး … ကလေး အဆို ..
ကျွဲကြီးကို အီမိလေသောအခါ …
သူရဲကောင်းရဲ့ လက်ထဲမှာ …
ပန်းကလေးတပွင့် အကြောင်း ....
ဧပြီဦး .. ဧပြီထူး .. ဧပြီ အရူး …